Frequently asked questions about the lockdown (isiXhosa) | Covid-19 Response
Frequently asked questions about the lockdown (isiXhosa)
Kukuthini ukumiswa ngxi kwezinto?
Ukumiswa ngxi kwezinto yindlela yeenkonzo ezingxamisekileyo efuna wonke umntu waseMzantsi Afrika ahlale ekhaya ngaphandle kokuba:
Wenza umsebenzi ongundoqo
Ufumana izinto okanye iinkonzon ezingundoqo
Ufumana izibonelelo zoluntu
Ufumana iinkonzo ezingxamisekileyo, iinkonzo zempilo ezixhalabileyo okanye unyango lwezifo ezondeleyo
Qaphela ukuba kungafuneka u skrinelwe i Covid-19 ligosa elinyanzelisa okongelixa ungeko ekhaya
IIvenkile zokutya, ikhemesti, iibhanki nezinye iinkonzo eziphambili ziyakusoloko zivuliwe
Iivenkile ezithengisa iimpahla kunye nemall mazivalwe, ngaphandle kokuba kuthengiswa izinto ezibalulekileyo ngokwemiqathango yokuba lowo makaqiniseke ngesithuba sokhuseleko phakathi kwabantu kunye nemeko yococeko
Izinto ezibalulekileyo kuphele emazithengiswe ezivenkileni
Kuvalwe yonke imida yoMzantsi Afrika ngelixesha lokumiswa ngxi kwezinto, ngaphandle kokuba kuhanjiswa iimpahla eziphambili nezingundoqo kunye namafutha eenqwelo/ipetroli
Luza kumiselwa ixesha elingakanani umiso ngxi lweentshukumo?
Ukumiswa ngxi kweentshukumo kuzwelonke kwaqala ezinzulwini zobusuku bangoLwesine 26 keyoKwindla, kwaye kuza kuqhubeka de kube sezinzulwini zobusuku bangoLwesine, 30 kwekaTshazimpuzi.
Kuza kwenzeka ntoni emva kokumiswa ngxi kweentshukumo?
Okwangoku, asazi. Urhulumente kazwelonke uza kuqhubeka nokuyibe' esweni imeko nesantya sosuleleko lweCovid-19 ukuze kufunyaniswe eyona ndlela efanelekileyo yokunqanda ukunwena kweCovid-19.
Kuza kwaziswa ngeenkcukacha ezithe vetshe ngokokukhula kwemeko.
Ziya kumiswa ngxi izinto kude kubenini?
Ukumiswa ngxi kwezinto kuzwelonke kwaqala ezinzulwini zobusuku bangomhla wama-26 kweyoKwindla, kwaye kuza kuqhubeka kude kube sezinzulwini zobusuku bangoLwesine, ngomhla wama-30 kwekaTshazimpuzi.
Kuzakwenzeka ntoni emva zokumiswa ngxi kwezinto?
Okwangoku asikazi. URhulumente kaZwelonke uzakuqhuba ngokujonga nokuqwalasela imeko kunye neqondo lokusulelwa yiCovid-19 ukuze sibone ezinye iindlela zokunqanda ukunwenwa kweCovid-19.
Baya kwaziswa abantu ngezinye iinkcukacha xa kukho ezivelayo.
Yintoni injongo yokumiswa ngxi kwezinto?
Ukumiswa ngxi kwezinto kazwelonke kuyimfuneko ebalulekileyo ukunqanda ukunwenwa kwecoronavirus (Covid-19) eMzantsi Afrika, ngokuphazamisana noklusulelana. Kuya kunqanda ukunwenwa kweCovid-19 kusindise ubobi babantu boMzantsi Afrika.
Yintoni endinokuyenza ngelixesha lokumiswa ngxi kwezinto?
Ngelixesha lokumiswa ngxi kwezinto ungenza oku:
• Ungaya kufuna uncedo lwezempilo
• Ukuthenga izinto ezingundoqo
• Ukuya ekhemisti
• Ukufumana iibhanki nezinye iinkonzo ezingundoqo
• Ukugalela amafutha ezithuthi
• Ukufuma izibonelelo zorhulumente
Unganako nokuya ezifihlweni, kodwa kufuneka abantu bangagqithi kumashumi amahlanu (50), kungabikho milindo namilaliso kubekho ukhuseleko kunye nococeko omalulandelelwe ukuze kunqandwe ukunwenwa kweCovid-19.
Qaphela ukuba akunyanzelekanga ukugcwaliswa ifom xa uza kuphuma uhambe endlwini uye kuthenga izinto ozifunayo okanye xa ufuna ukuya kufikelela kwiinkonzo eziphambili.
Ngabantu abawashiya amakhaya abo kuba besiya emsebenzini kuphela ekufuneka bafumane imvume kumqeshi eqinisekisa ukuba benza imisebenzi ephambili okanye basebenza ngezinto ezingundoqo.
Yintoni emandingayenzi ngelixesha lokumiswa ngxi kwezinto?
Ngexesha lokumiswa ngxi kwezinto AWUNAKO ukwenza oku:
Ukuhambela amanye amaphondo
Ukuhambela isiXeko saseKapa kumbindi nakwezinye iindawo zesaNtshona Koloni
Ukushiya eli loMzantsi Afrika
Kuyakwenzeka ntoni ukuba andiyithobeli imithetho yokumiswa ngxi kwezinto?
Nabani na ophikisana nemithetho yokumiswa ngxi kwezinto ngokungayithobeli imida ngokuhamba nokuvala uya kubanetyala lokwaphula umthetho aze afumane nesohlwayo okanye ubanjwe uvalelwe ixesha leenyanga ezingadlulanga kwezintandathu okanye zombini ezi zohlwayo nokuvalelwa.
Kufuneka ndenze ntoni ukuba ndimisiwe okanye ndibanjiwe ngamagosa anyanzelisa umthetho xa ndithe ndemka ekhaya ngelixesha lokumiswa ngxi kwezinto?
Ukuba uye wemiswa, kufuneka unike isizathu sokushiya ikhaya esiyakuthi sivunyelwe ukuba ihambelana nezizathu ezivumelekileyo zokushiya ikhaya.
Umqeshi wakho makakunike imvume, ipemethi, ebhaliweyo, enengcaciso ekwifom yoko, ukuze ukwazi ukushiya ikhaya lakho uyokwenza iinkonzo ezingundoqo. Lemvume mayivezwe kwigosa lonyanzeliso-mthetho xa uthe wemiswa emva kokuba ushiye ikhaya uyokwenza iinkonzo ezingundoqo.
Ukuba uthe wabanjwa, uyakunikwa onke amalungelo aqhelekileyo. IMeko yeNtlekele- State of Disaster ifanele isetyenziswe ngokwendlela eyiyo ngokoMqulu wamaLungelo.
Ndisifaka njani isikhalazo ngakwigosa lonyanzeliso mthetho?
Izikhalazo ngakumagosa eSAPS zingafakwa kuNozikhalazo wamaPolisa weNtshona Koloni (iWCPO):
Okanye ungasifaka isikhalazo sakho ngeintanethi ku- www.westerncape.gov.za/police-ombudsman
Izikhalazo ngakumagosa eSANDF zingafakwa kuNozikhalazo woMkhosi:
Umnxeba wasimahla: 080 726 6283
Izikhalazo ngakumagosa wamaPolisa eMetro weSixeko saseKapa zingafakwa kwiCandelo loPhando lamaPolisa eliZimeleyo (IPID):
Umnxeba: 021 941 4800
Ukungasebenzi kakuhle okanye ukuba nobungonyama obunxulumene noNyanzeliso Mthetho: RichardGavin.Bosman@capetown.gov.za
Ukuba ndibona umntu ongawuthobeliyo umthetho wokumiswa ngxi kwezinto ndingaxela kubani okanye phi?
Ungatsalela kule nombolo 10111 okanye kumapolisa akufutshane nawe okanye kumagosa onyanzeliso lomthetho uxele nabani na ongawuthobeliyo umthetho wokumiswa ngxi kwezinto.
Zeziphi iimpahla ezifumanekayo ngelixesha lokumiswa ngxi kwezinto?
Iimpahla eziyakufumaneka ngokuthenga ngeli xesha Llokumiswa ngxi kwezinto ziquka ezi zilandelayo:
Nakuphi na ukutya, kuquka iziselo ezinganxilisiyo
Iikhemikhali, imveliso ezongezelelweyo/ yokuncedisa elungiselelwe ukuhanjiswa ezisetyenziswa xa kusenziwa nayiphi na imveliso yako nakuphi ukutya
Itoilet paper, iisanitary pads, isanitary tampons, iikhondom
Iisanithayiza zezandla, izibulali zintsholongwane, isepha, utywala, izinto zokucoca ekhaya kunye nezixhobo zokuzikhusela
Iikhemikhali, imveliso ezongezelelweyo/ yokuncedisa elungiselelwe ukuhanjiswa ezisetyenziswa xa kusenziwa nayiphi na imveliso yayo nayiphi into kwezi zingasentla
Izinto zokunceda iintsana nabantwana
Izinto zokuhlamba nokunceda iintsana nabantwana, ziquka ukukhathalelwa kweenwele, umzimba, nobuso, ezamakhwapha, neziqholo kunye nezamazinyo
Zakukhutshwa izixhobo zoogqirha nezasesibhedlele kunye nezixhobo zokuzikhusela
Amafutha eenqwelo, kuquka amalahle nogesi
Iimpahla eziphambili, kuquka i-airtime kunye nombane
Ngubani ovumeleke ukuba aphangele?
Bonke abo banemisebenzi oziinkonzo ezingundoqo okanye eziphambili bayakuvunyelwabona kuya emisebenzini. Umqeshi wakho makakunike isiqinisekiso sokusebenza, ipemethiebhalwe kwifom emiselweyo, ukuze ukwazi ukushiya ikhaya lakho uye emsebenzini. Ukuba umsebenzi wakho awuniki zinkonzo zingundoqo okanye iinkonzo eziphambili, kwakufuneka uhlale ekhaya.
Uluhlu lweenkonzo ezingundoqo luya kupapashwa, kuqukwa iikhemisti, iibhanki, iivenkile zokutya, igaraji zepetroli kunye nabaniki ziinkonzo zempilo. Linkampani ezibandakanya imveliso, unikezelo okanye ulungiselelolweempahla ezingundoqo okanye iinkonzo eziphambili ziyakusoloko zivuliwe Jonga uluhlu lwezinto eziziinkonzo ezingundoqo.
Livenkile zokutya kunye neebhanki ziyakusoloko zivuliwe ngelixesha lokumiswa ngxi kwezinto. Ukuthenga ngogxalathelwano okanye “ukuthenga kakhulu ngoloyiko” akukhuthazwa.
Ndingasisebenzisa isithuthi sikawonkewonke ngeli xesha lokumiswa ngxi kwezinto?
Ungasisebenzisa isithuthi sikawonkewonke ukuba uzakwenza imisebenzi engundoqo, ukufuna iinkonzo eziphambili, ukufumana uncedo kwezempilo, ukuya ezifihlweni kwakunye nokuya kwamkela imali yesibonelelo sorhulumente.
Ungasebenzisa kuphela iinkonzo zebhasi, iteksi (kuqukwa iiteksi zohlobo lweminibhasi) iinkonzo ze e-hailing kunye nezithuthi zabucala zizo kuphela ezonokusetyenziswa xa kusenziwa ezi nkonzo ngeli xesha lokumiswa ngxi kwezinto. Ziya kuvunyelwa ukuhamba ukusukela nge-05h00 ekuseni ukuya kwi-9h00 ekuseni kwakhona nge-16h00 emva kwemini ukuya nge-20h00 ngorhatya.
Xa usebenzisa ezi zithuthi zichaziweyo kufuneka ungakhwelisi ngaphezu kwe- 50% yomlinganiselo wesithuthi eso. Umzekelo kwiteksi encinci kuvumeleke ukuba ikhwelise abantu abasibhozo kuphela kunenani layo lesiqhelo elingu-16.
Isithuthi sabucala masingakhwelisi ngaphezu kwe-60% yomlinganiselo wesithuthi. Zonke iindlela zokhuseleko nezococeko masilandelewe ukuze sinqande ukunwenwa kwe Covid-19.
Ukubaunika iinkonzo ezinghundoqo yaye awukwazi kuya emsebenzi, umqeshi wakho makenze amalungiselelo okufumana isithuthi ukuze ukwazi ukuya kufikelela emsebenzini.
Nakweziphi na iinkonzo ezingundoqo abaqeshi bafumana ingxaki ekulungiseni izithuthi zabasebenzi ukuze baye emsebenzini, bangaqhagamshelana neSebe leZoThutho neMisebenzi yoLuntu kwiofisi yeNtloko ku HOD.TransportPublicWorks@westerncape.gov.za, uchaze umqobo lowo omalunga nesithuthi eso. Nceda ufake iinkcukacha ezicacileyo, kuquka nenani labantu abaza kuthathwa, besuka phi, besiya phi, ngabani ixesha.
Ukuba uziva unomkhuhlane/ iflu eneempawu ze Covid-19, ezifana nefiva okanye ukukhohlela, kungcono uhlale ekhaya. Oku akwenzelwa wena kuphela, koko kukunqanda ukusulela abanye abakhweli.
Ziya kufumaneka ngawaphi amaxesha isithuthi ngexesha lokumiswa ngxi kwezinto?
Iveki enye kuphela, ukusuka ngoMvulo, umhla wama-30 kuMatshi 2020 ukuya kuLwesihlanu umhla wesi-3 kuEpreli 2020, izithuthi zikawonkewonke ziya kuvumeleka zisebenze ukususela ngo-05:00 (5 ekuseni) ukuya ku-20:00 (8 ngokuhlwa) xa kusiya epeyini yesocial grant.
Ngeli xesha lokumiswa ngxi kwezinto, iiteksi zohlobo lweminibhasi, iimetered teksi, e-hailing services neebhasi ziya kusebenza kuphela ukususela ngo-05:00 (5 ekuseni) ukuya ku- 09:00 (9 kusasa), nango-16:00 (4 emalanga) ukuya ku-20:00 (8 ngokuhlwa). Waqaphele la maxesha okusebenza kwezithuthi ukuze ungaziboni sewungenanto yokuhamba.
Amaxesha okuhamba kweebhasi eNtshona Koloni:
Ngomhla wama-26 kuMatshi 2020, iSixeko saseKapa sabhengeza ukuba siza kuziphungula iibhazi zenkonzo yeMyCiti siqhubeke nokuthutha abasebenzi bezempilo, abanye abasebenzi beenkonzo eibalulekileyo namashishini abalulekileyo, nezinto ezibalulekileyo ezifuna ukuthengwa – ukutya, amayeza, neesocial grant.
Kwakweso sibhengezo sinye, iSixeko saseKapa savakalisa ukuba iya kusebenzo yona inkonzo yeDial-a-Ride, kodwa iya kuthutha abasebenzisi baso ukuya ezibhedlele okanye eziklinikhi ukuya kufumana uncedo abalufunayo lwezonyango, nokuya kuthenga amayeza nokuya kupeya isocial grant. Abo benza inkonzo ebalulekileyo baya kuthuthwa ukuya emisebenzini. Ukubhukisha kufuneka kwenziwe kwangenx’engaphambili, njengoko kusenziwa.
Ngomhla wama-26 kuMatshi, iiNkonzo zeGolden Arrow Bus zabhengeza ukuba ziya kuzinciphisa iinkonzo zazo zothutho zisebenze ukuqala ngo-05:00 de kube ngu-09:00 nokusuka ku-16:00 de ibe-20:00.
Ngomhla wama-26 kuMatshi 2020, inkonzo yebhasi i- Go George yabhengeza ukuba iya kubonelela ngeebhasi ezincitshisiweyo kwiindlela ezininzi zesiqhelo kwi-main routes, zijolise kubasebenzi abakwiinkonzo ezibalulekileyo ukususela ngo- 05:00 de ibe-09:00 ziphinde kwakhona zihambe ukususela ngo-16:00 de ibe ngu-20:00.
Njengomzali oqhawule umtshato obolekisanayo ngabantwana, ingaba sakuvumeleka ukuba sihambise abantwana kumakhaya ohlukeneyo?
Ixesha lokumiswa ngxi kwezinto alwenzanga malungiselelo okuba ungalishiya ikhaya ukutshintsha abantwana phakathi kwamakahaya amabini.
Ndingaphuma ekhaya ndihambisa inja, okanye ndizilolonga, njengokubaleka nokuhamba ngebhayisikile?
Hayi awunakuphuma ekhaya uyokuhambisa inja, okanye ukuzilolonga okunjengokubaleka okanye uhamba ngebhayisikile.
Ndingabuthenga utywala ngelixesha lokumiswa ngxi kwezinto?
Akuzuthengiswa tywala ngelixesha lokumiswa ngxi kwezinto.
Ingaba izikolo zizakuvulwa emva kokumiswa ngxi kwezinto?
UMphathiswa weMfundo esiSiseko, uAngie Motshekga, utshilo ukuba okwangoku akukaziwa ukuba izikolo zizakuvulwa nini.
Umhla wokuvula uyakuxhomekeka ekubeni kwenzeka ntoni ngelixesha lokumiswa ngxikwezinto, phofu xa sibenako ukunqanda ukunwenwa kweCovid-19.
Singathanda ukubona izikolo zivulwa emva kokuba ukumiswa ngxi kwezinto sekuphelisiwe njengoko bekucwangcisiwe, yaye yiloonto kubalulekile ukuba abantu bahlale emakhaya, kodwa ke okwangoku asikwazi kunika umhla oqinisekileyo.
Ingaba lizakwenza njani iSebe leMfundo ukubuyisa elixesha lokufundisa lilahlekileyo ngelixesha lokumiswa ngxi kwezinto?
Oku kuyakuxhomekeka ekubeni lingakanani na ixesha lokufundisa elilahlekileyo ngexesha lokumiswa ngxi kwezinto. Okwangoku abafundi bafanele ukuba basekhefini kakade, kuyakuxhomekeka nasekubeni kuvalwe ixesha elingakanani, kunokwenzeka sisebenzise ukufundisela ekhaya.
ISebe leMfundo likaZwelonke nelamaphondo asebenza nzima ukwenza uluhlu lwezifundo ezisekhompyutheni, ezinye zazo azihlawulelwa, kubekho nezifundo eziyakwenziwa ngosasazo koomabonakude nakoonomathotholo (iTV ne-radio), ukuba kuthe kwavalwa ixesha elide.
Siyakulazisa uluntu ngexesha elifanelekileyo. Okwangoku, inye eyona nto onokuyenza ukunceda abantwana bakho ngokwemfundo ngelixesha lokumiswa ngxi kwezinto,kukuba fundela okanye ufunde n abo iincwadi yonke imihla.
Ukufunda sesona sixhobo sibalulekileyo nesiyimfuneko ekufundeni zonke izifundo, yaye yeyonanto iphambili kuZwelonke nakwiphondo.